CITE NOUVELLE VILLE TOAMASINA : Karàna vavy maty nisy nitifitra teo amin’ny lohany
Nirefotra ny basy ary nijininika ny ra. Ny alarobia 5 avrily tokony ho tamin’ny 12 ora antoandro, dia Karàna vavy iray sahabo 50 taona eo ho eo, izay handeha hamonjy ny toeram-ponenany ao amin’ny Cité Nouvelle Ville Toamasina no notafihin-jiolahy. Avy hatrany dia notifirin’izy roa lahy ilay Karàna ka voa teo amin’ny lohany. 6 avril 2017
Raha ny fanazavan’ireo nanatri-maso, dia jiolahy roa mandeha môtô, tsy nisaron-tava ary nitondra basy P.A. no nahavanon-doza. Vantany vao niala ny Tuc-tuc nitondra azy ilay Karàna vavy, dia notsenain’ireo olon-dratsy tamin’ny tifitra teo amin’ny lohany. Vokany, naratra mafy ilay vehivavy. Tsy nokasihin’ireo olon-dratsy kosa ny ramatoa iray teratany malagasy niara-dia taminy. Tsy misy zavatra nalain’ireo jiolahy anefa tany amin’ireo voatafika. Ahiana ho valifaty ity tranga ity.
Nirifatra nandositra avy hatrany ireo olon-dratsy raha vao avy nitifitra ka tavela teo hatramin’ny aroloha nentin’izy ireo. Ny olona teo amin’ny manodidina no niantso mpitandro filaminana ka tonga teny an-toerana ny Emmo-Sécurité. Noentina haingana teny amin’ny Hôpitalibe Toamasina ilay naratra saingy tsy tana ny ainy, tokony ho tamin’ny 1 ora sy fahatelony tolakandro, na dia efa niala nenina aza ny mpitsabo.
Na dia efa manao ny ezaka rehetra aza ny mpitandro filaminana eto Toamasina, dia tsy mitsahatra mampihorohoro hatrany ireo jiolahy.
Tsy mbola naneho hevitra mahakasika izao raharaha izao ihany koa ny havan’ilay Karàna maty.
Na izany aza efa mandeha ny famotorana sy ny fanadihadiana mahakasika izany ary efa karohana ireo nahavanon-doza.